kungani u-cortana engekho kusifunda noma ngolimi lakithi? – Ukusekela Windows 10
kungani u-cortana engekho kusifunda noma ngolimi lakithi?
Izifunda Cortana kanye izilimi
Izifunda & izilimi
Ukuze usebenzise Cortana, izilungiselelo zakho isifunda nolimi kufanele kuqondaniswe. Bheka uhlu olulandelayo izifunda lapho Cortana itholakala, futhi ulimi esihambisanayo ngamunye kulezo zindawo.
Cortana itholakala kulezi zindawo ngalezi zilimi:
China: Chinese (Esenziwe Lula)
Qaphela: Uma ushintsha isifunda sakho, ungase ukwazi ukuthenga ngesikhathi Store, noma usebenzise izinto uthengele ezifana ubulungu izikhokhelo, imidlalo, amafilimu, TV nomculo.
Update: Uma izilungiselelo zakho zilungile kodwa wena namanje ngeke ukwazi ukusebenzisa Cortana, kokufaka yakamuva Windows Updates kungenzeka ulungise inkinga. kungani u-cortana engekho kusifunda noma ngolimi lakithi?
Ukusebenzisa Cortana, zonke lezi zimo ziye isethwe ulimi olufanayo:
Izilimi (lokhu idivayisi ngolimi lwakho)
Izwe noma indawo
Ukuze ukuqinisekisa ukuthi izilungiselelo zakho zilungile noma ukwenza ushintsho:
Vula Izilungiselelo. Khetha Isikhathi & ulimi, bese Region & ulimi.
Hlola ulimi (isethwe njengoba default) izilungiselelo Windows display ngolimi lwakho. Ukuze uthole ulimi olusha, khetha Engeza ulimi, bese ukhetha omunye ohlwini. Kungathatha imizuzu embalwa ukuba pack ulimi ukulayisha. Uma ususa ulimi, ungakwazi njalo uyibuyisela kamuva.
Hlola Country noma isifunda setting. Qinisekisa ukuthi izwe akhethiwe uhambelana Windows Display ulimi asibeka setting Language.
Buyela emuva kuzilungiselelo> Isikhathi & ulimi> Speech and uqinisekise ukuthi setting Speech ulimi edlelana ne izilungiselelo eyedlule. Uma ulimi ufuna ayitholakali, landela izinyathelo kuthebhu eduze uyifaka.
Phuma bese ungena ngemvume futhi ukuze izilungiselelo ezintsha ukuthatha nomphumela.
Qaphela: Ukuze kumadivayisi eselula, qinisekisa ukuthi unayo izilungiselelo elungile ulimi, Region futhi Speech ngaphansi Izilungiselelo> Isikhathi & ulimi.
Iya Ulimi> Engeza ulimi ukwengeza ulimi olusha.
Iya Speech> Engeza ulimi ukwengeza ulimi olusha inkulumo.
Akuzona zonke izinketho ayatholakala kuzo zonke izifunda kanye izilimi. Abanye izilimi kungase kudinge ukuba ngesandla thwebula pack inkulumo ngolimi.
Khetha inkinobho Qala, bese ukhetha Izilungiselelo> Isikhathi & ulimi> Region & ulimi.
Khetha ulimi, bese Izinketho.
Ngaphansi Speech, khetha Download. Kungase kuthathe umzuzu noma emibili ukuze pack inkulumo ukulayisha.
Phuma bese ungena ngemvume futhi ukuze entsha inkulumo iphakethe ukungezwa ongakhetha inkulumo.
Buyela emuva Time & ulimi, khetha ulimi lwakho olusha, bese Beka njenge Oxhu nab.
On Izinhlelo> Isikhathi ulimi> Speech, qinisekisa ukuthi setting Speech ulimi edlelana ne izilungiselelo eyedlule.
Previous Previous post: indlela yokuthola usizo ku-windows 10
Next Next post: hlola izibuyekezo ku-windows 10